Zimbabwe Public Holidays News and Updates (Africa/SADC) - qppstudio.net
See also: upcoming public holidays in Zimbabwe and public holidays news and updates in Botswana, Mozambique, South Africa, Zambia.
This page contains a sampling of our database of news and updates related to Zimbabwe public holidays, bank holidays, government holidays and national holidays, as of March 2022, and covering calendar year 2023 Zimbabwe public holidays, gathered as part of our continuous monitoring of worldwide news media and official government sources to detect changes to bank holidays and public holidays legislation, or ad hoc bank holidays and public holidays changes, anywhere in the world.
Below is this list of Zimbabwe public holidays news and updates.
Zimbabwe 2023 Public Holidays Gazetted
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Minister of Home Affairs and Cultural Heritage, Kazembe Kazembe, has gazetted the annual announcement of the dates for the 2023 non-working public holidays in Zimbabwe in the General Notice 468 of 2022 ("GN 2022-468 Public Holidays And Prohibition Of Business Act For 2023").
Zimbabwe Rules-Out May 3rd Public Holiday
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Home Affairs and Cultural Heritage Ministry has issued a statement refuting the rumours, circulating on social media, that Monday, May 3rd, 2021, had been declared a one-off public holiday on account on the annual May 1st public holiday of Zimbabwe falling on a Saturday, in 2021.
Zimbabwe 2022 Public Holidays Gazetted
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Minister of Home Affairs and Cultural Heritage, Kazembe Kazembe, has gazetted the annual announcement of the dates for the 2022 non-working public holidays in Zimbabwe in the General Notice 851 of 2021 ("GN 2021-851 Public Holidays And Prohibition Of Business Act For 2022").
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Home Affairs and Cultural Heritage Ministry has announced that Sunday, February 21, 2021, would be the date of the upcoming National Youth Day public holiday in Zimbabwe ("the public should take note that Monday has been made a public holiday").
Zimbabwe 2021 Public Holidays Gazetted
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Minister of Home Affairs and Cultural Heritage, Kazembe Kazembe, has gazetted the annual announcement of the dates for the 2021 non-working public holidays in Zimbabwe in the General Notice 2554 of 2020 ("It is hereby notified, that the Minister has, in terms of section 2(1) of the Public Holidays and Prohibition of Business Act [Chapter 10:21], declared that the days listed in the Schedule shall be public holidays in 2021").
Zimbabwe Public Holiday May 25
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Government has declared Monday, May 25, 2020, as a public holiday in Zimbabwe, on account of the upcoming annual public holiday for Africa Day.
Zimbabwe Public Holiday December 23
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Permanent Secretary for the Ministry of Home Affairs and Cultural Heritage, Aaron Nhepera, has announced that the Government of Zimbabwe had declared Monday, December 23, 2019, as a public holiday in Zimbabwe, "as it comes after the celebration of National Unity Day on Sunday, December 22".
The Herald (Harare) - Earlier tonight, Zimbabwe's Ministry of Information issued a communique announcing that the Government of Zimbabwe had declared Friday, October 25, 2019, as a public holiday in Zimbabwe to allow people to attend the day of solidarity against sanctions on Zimbabwe.
Zimbabwe 2020 Public Holidays Gazetted
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Home Affairs Ministers has gazetted the annual announcement of the dates for the 2020 non-working public holidays in Zimbabwe in terms of the Zimbabwe Public Holidays and Prohibition of Business Act (Chapter 10:21).
Zimbabwe Rules-Out Weeklong Public Holidays
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Ministry of Information has issued a tweet ruling-out the declaration of a weeklong period of non-working public holidays in Zimbabwe following the death of Robert Mugabe in Singapore.
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Home Affairs Ministers has gazetted the annual announcement of the dates for the 2019 non-working public holidays in Zimbabwe in terms of the Zimbabwe Public Holidays and Prohibition of Business Act (Chapter 10:21).
Government of Zimbabwe (Harare) - The government of Zimbabwe has declared Monday, July 30, 2018, as a one-off non-working public holiday in Zimbabwe on account of the upcoming elections "to enable the electorate to vote without hassles from work-related commitments".
Government of Zimbabwe (Harare) - The Electoral Amendment Act was gazetted in a Zimbabwe Gazette Extraordinary, as Act No. 6 of 2018, which states that "The polling day or polling days fixed shall be deemed to be a public holiday or public holidays, as the case may be, for the purposes of the Public Holidays and Prohibition of Business Act [Chapter 10:21].".
Zimbabwe Mulls Summer Electoral Public Holiday
Government of Zimbabwe (Harare) - Zimbabwe's President, Emmerson Mnangagwa, is reported to be considering the declaration of a one-off public holiday in Zimbabwe on the occasion of the coming Presidential and Parliamentary elections, scheduled for July or August of 2018.
Zimbabwe Confirms February 21 Public Holiday
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Service Commission chairman, Mariyawanda Nzuwah, has released a statement re-confirming that Wednesday, February 21, 2018, would be a non-working public holiday in Zimbabwe, as per the terms of the "Statutory Instrument Number 143 of 2017" (gazetted on November 24, 2017).
The Herald (Harare) - The recently instated president of Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, has signed the Statutory Instrument 143 published in the Zimbabwe Government Gazette, yesterday, which gazettes February 21 as a new annual non-working public holiday in Zimbabwe to be called Robert Gabriel Mugabe National Youth Day.
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Home Affairs Ministers, Ignatius M. C. Chombo, has gazetted the annual announcement of the dates for the 2018 non-working public holidays in Zimbabwe in terms of the Zimbabwe Public Holidays and Prohibition of Business Act (Chapter 10:21).
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Home Affairs Minister, Ignatius Chombo, has announced that the government of Zimbabwe had amended the annual list of non-working public holidays in Zimbabwe by declaring February 21 as Robert Gabriel Mugabe National Youth Day, a new annual non-working public holiday in Zimbabwe, in honour of Robert Mugabe, who has ruled Zimbabwe since 1980, and who was born on February 21, 1924.
Zimbabwe Public Holidays December 27 and January 2
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Home Affairs Ministers has confirmed that Tuesday, December 27, 2016, and Monday, January 2, 2017, would be non-working public holidays in Zimbabwe.
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Home Affairs Ministers, Ignatius M. C. Chombo, has gazetted the annual announcement of the dates for the 2017 non-working public holidays in Zimbabwe in terms of the Zimbabwe Public Holidays and Prohibition of Business Act (Chapter 10:21).
Zimbabwe 2016 Public Holidays Amended
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Home Affairs Ministers, Ignatius Chombo, has gazetted an amended version of the recently-released annual announcement of the dates for the 2016 non-working public holidays in Zimbabwe in terms of the Zimbabwe Public Holidays and Prohibition of Business Act (Chapter 10:21).
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Home Affairs Ministers, Ignatius Chombo, has gazetted the annual announcement of the dates for the 2016 non-working public holidays in Zimbabwe in terms of the Zimbabwe Public Holidays and Prohibition of Business Act (Chapter 10:21).
Zimbabwe March 8 Public Holiday Bill
The Parliament of Zimbabwe (Harare) - Zimbabwe's MP Ms. Khupe has introduced a bill into the Parliament of Zimbabwe to have International Women's Day declared as a new annual non-working public holiday in Zimbabwe.
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Home Affairs Ministers, Kembo Mohadi, has gazetted the annual announcement of the dates for the 2015 non-working public holidays in Zimbabwe in terms of the Zimbabwe Public Holidays and Prohibition of Business Act (Chapter 10:21).
Government of Zimbabwe (Harare) - Zimbabwe's President, Robert Mugabe, has declared Thursday, August 22, 2013, the date of President Robert Mugabe's re-inauguration, as another one-off non-working public holiday in Zimbabwe.
Government of Zimbabwe (Harare) - Zimbabwe's President, Robert Mugabe, has declared Wednesday, July 31, 2013, the recently confirmed date for the upcoming Presidential election, as a one-off non-working public holiday in Zimbabwe, in terms of the Public Holidays and Prohibition of Business Act.
Government of Zimbabwe (Harare) - Zimbabwe's Co-Home Affairs Minister, Kembo Mohadi, announced yesterday that the government of Zimbabwe was deliberating on the possibility of declaring Wednesday, July 31, 2013, the recently confirmed date for the upcoming Presidential election, as a one-off non-working public holiday in Zimbabwe.
Zimbabwe Public Holiday July 31 ?
Government of Zimbabwe (Harare) - Zimbabwe's Constitutional Court, in a unanimous decision, has confirmed Wednesday, July 31, 2013, as the date of the upcoming Presidential election, which as per the recently-amended Electoral Act, will be a non-working public holiday in Zimbabwe.
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Home Affairs Co-Ministers, Kembo Mohadi and Theresa Makone, have issued the annual announcement of the dates for the 2014 non-working public holidays in Zimbabwe in terms of the Zimbabwe Public Holidays and Prohibition of Business Act (Chapter 10:21).
Government of Zimbabwe (Harare) - Zimbabwe's Ministry of Home Affairs has published an Extraordinary Gazette which declares Saturday, March 16, 2013, as a one-off non-working public holiday throughout Zimbabwe to allow every employee time to participate in the upcoming constitutional referendum.
Zimbabwe Releases 2013 Public Holidays
Government of Zimbabwe (Harare) - Zimbabwe's Government has finally gazetted the official list of 2013 non-working public holidays in Zimbabwe which was announced late last year.
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Ministry of Home Affairs has announced that President Robert Mugabe had declared Monday, December 24, 2012, as a one-off non-working public holiday throughout Zimbabwe.
Zimbabwe 2013 Public Holidays Announced
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Home Affairs Co-Ministers, Kembo Mohadi and Theresa Makone, have announced that the Government of Zimbabwe had officially gazetted the list of 2013 non-working public holidays.
Zimbabwe March 8 Public Holiday Push
The Herald (Harare) - The Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) has called on the government of Zimbabwe to declare March 8 an annual non-working public holiday in Zimbabwe to commemorate International Women's Day.
Zimbabwe Public Holiday December 27
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Secretary for Media, Information and Publicity, George Charamba, has announced that the Cabinet of Zimbabwe had decided to declare Tuesday, December 27, 2011, as an additional one-off non-working public holiday throughout Zimbabwe.
Zimbabwe 2012 Public Holidays Announced
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Home Affairs Co-Ministers, Kembo Mohadi and Theresa Makoni, have announced that the Government of Zimbabwe had officially gazetted the list of 2012 non-working public holidays.
Newsday (Harare) - Zimbabwe's Home Affairs co-minister, Kembo Mohadi, has said that he would "consider the application" when he does receive an application to have July 1 declared a national public holiday in honour of the late nationalist and former Vice-President Joshua Nkomo.
Newsday (Harare) - Zimbabwe's Deputy Prime Minister, Thokozani Khupe, has urged the government of Zimbabwe to declare International Women's Day as an annual public holiday on March 8.
Zimbabwe 2011 Public Holidays Announced
The Herald (Harare) - Zimbabwe's Home Affairs Co-Minister, Kembo Mohadi, has announced that the Government of Zimbabwe had officially gazetted the list of 2011 non-working public holidays.
The Guardian (Harare) - Zimbabwe's unity government has declared the afternoon of Wednesday, June 2, 2010, as a one-off public holiday to coincide with that day's friendly pre-World Cup match against Brazil.
The Zimbabwe Chronicle (Harare) - The Zimbabwe Congress of the Trade Unions (ZCTU) has renewed its call to have June 6, the anniversary of the Kamandama Mine Disaster in Hwange where more than 400 mine workers died in 1972, be declared an official non-working public holiday.
Zimbabwe Declares July 24-26 National Peace Days Holiday
Zimbabwe Internet Radio (Harare) - Zimbabwe's President, Robert Mugabe, has issued an extraordinary government gazette proclaiming another Unity Day Holiday, in the form of a 3-day, July 24-26, National Peace Days.
The Sunday Mail (Harare) - The leadership of the Zapu-PF party has called on the Government of Zimbabwe to declare July 1 a new annual public holiday, to commemorate the anniversary of the death of Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo, also known as Umdala Wethu and Father Zimbabwe.
Zimbabwe 2010 Public Holidays Announced
Zimbabwean Government Gazette (Harare) - Zimbabwe's Home Affairs Co-Ministers, Kembo Mohadi and Giles Mutsekwa, have announced that the list of normal public holidays had been gazetted for 2010.
VOA News (Harare) - After years of shunning the April 18, Independence Day, public holiday, Zimbabwe's new Prime Minister, Morgan Tsvangirai, and his MDC Party are now saying that the Independence Day is a national event and the property of no single political party.
Zimbabwe 2009 Public Holidays Announced
The Herald (Harare) - President Mugabe has gazetted the official list of 2009 public holidays in Zimbabwe.
Zimbabwe Likely To Declare June 27 Public Holiday
Associated Press - Earlier today, the Zimbabwe electoral commission announced that a run-off election between Zimbabwe's President Robert Mugabe and opposition leader Morgan Tsvangirai will be held on Friday, June 27, 2008.
IOL - President Mugabe has declared Saturday, March 29, 2008, a public holiday to enable workers to vote in the presidential, parliamentary and local government elections.
BusinessWeek - The government has lifted price controls on beer, to ensure that supplies are not disrupted during next week's 2 consecutive public holidays.
Zimbabwe 2008 Public Holidays Announced
The Herald - The Minister of Home Affairs announced the list of public holidays for next year in terms of the Public Holidays and Prohibition of Business Act.
Zimbabwe Declares March 9 Election Public Holiday
Pan-African News Agency (PANA) - Yesterday, Zimbabwe's President, Robert Mugabe, announced that he would declare Saturday, March 9, 2002, as a one-off public holiday to allow people to vote in this weekend's presidential election.
Zimbabwe Amends Public Holidays Law
The Herald - The Government of Zimbabwe has gazetted Act 17 of 2001 which amends the current law regulating public holidays in Zimbabwe, the "Public Holidays and Prohibition of Business Act".
Zimbabwe Declares July 5 Public Holiday
Associated Press - Zimbabwe's President, Robert Mugabe, declared Monday, July 5, 1999, as a one-off public holiday to honor Joshua Nkomo, Zimbabwe's vice president, who died yesterday.
See also: Zimbabwe bank holidays and public holidays for 2022, 2023, 2024, 2025 and 2026.
Background Information (Zimbabwe)
Wikipedia page for Zimbabwe (includes commemorative dates that are not necessarily public holidays)
Reserve Bank of Zimbabwe (Zimbabwe central bank)
ISO-3166 Codes: ZW and ZWE.
ICANN Internet Domain: .zw.